सांसद-155: मिलाउने। शिकार राइफल सांसद-155: तस्बिर, मूल्य, विशेषताहरु
IMZ लामो उच्च गुणवत्ता र अत्यधिक टिकाऊ उत्पादनहरु, उत्कृष्ट हातले नै साबित भएको छ। एमआर-153 - यो कम्पनीको विकास एक शिकार राइफल तिनीहरूले यो मोडेल गर्न पूर्ववर्ती को आधार लियो जहाँ सांसद-155, भएको छ। यसबाहेक, बन्दूक को सबै पक्षहरू थप कुरा।
हुनत यो संकलन वस्तुहरूको laurels दावी गर्दैन बन्दूक को बाह्य उपस्थिति, धेरै दिन लायक छ। सबै को पहिलो, अलंकृत डिजाइन तत्त्वहरू स्ट्राइकिङ्: जटिल ब्रेसहरू र बट थाली, को पाखुरा मा नमूना, को फ्यूज बटन को त्रिकोणीय आकार र यति-अगाडी। सामान्य मा, निर्माता अधिक शानदार टिप्पणीहरू गर्न brevity र सादगी देखि गएका छन्। प्रसन्न र shotguns वजन दयनीय 3.15 किलो constituting। निस्सन्देह, आयातित वस्तुहरू बीच त्यहाँ पनि हल्का हो, तर मूल्य पनि आफै महसुस गरिरहेको छ 15-20% गर्न घरेलू बन्दूक को समान संकेतक अधिक। यो बिन्दुमा कुनै पनि शिकारी को ध्यान एमआर-155 गर्न पतन हुनेछ। ट्युनिङ, खैर, एक अभिन्न जो तपाईं कुनै पनि विनिर्माण दोष को हटाउनु वा बन्दूक को प्रदर्शन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, सबै बन्दुक को भाग हो। हामी डिजाइन कुरा भने, तपाईंले आफ्नो खरीद थप प्रभावकारी sleeker हेर्नेछौं जो संग र आवेदन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रशंसक एमआर लाइन endlessly अवधारणा राम्रो छ के तर्क: जहाँ बन्दूक लागि थप अभिप्रेरित थियो सांसद-153, थियो कि एक "बाक्लो" शूटिंग, वा एमआर-155 पहिले नै सजिलै छ चलिरहेको शिकार गर्न अनुमति दिन्छ। यति धेरै राय - यहाँ कति मान्छे छ। हामी एमआर-155 को विशेषता के कुरा भने, यहाँ तपाईं 155 औं 153rd केही मतभेद देख्न सक्छौं। निस्सन्देह, त्यहाँ बन्दूक अलिकति थियो कम जहाँ लम्बाइ 610 देखि 750 मिमी, विभिन्न संशोधनहरू र मिलाउने तत्व आधारमा गर्न फरक हुन्छ। वजन 3.15 3.25 किलो देखि दायरा।
सांसद-155: हिउँदमा मिलाउने
जाडो शिकार कुनै पनि शिकारी लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, तर जनावरको एक गाढा रंग को पृष्ठभूमि को बिरुद्ध खडा डराएको दृष्टि राइफल हुन सक्छ। को पाठ्यक्रम, तपाईं माथि आवेदन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूको लागत रूसी नागरिक को लागि एक राम्रो कारण उच्च पर्याप्त छ। यो मौसमी छ, र बन्दूक चाहनुहुन्छ छैन हरेक समय एक repaint गर्न - यो मामला मा, तपाईं बन्दूक सेतो रंग मा, जाडो किनभने रंग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यस्तो कट्टरपंथी कदम जायज छैन। र यहाँ सहायता गर्न र तपाईंलाई थप बताउन जो परम्परागत विधिहरू, आउन सक्दैन।
तपाईं जाडो समयमा सांसद-155 बन्दूक शिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो जो पूर्ण भेष को कार्य सामना छलावरण लगान साधारण महिला चड्डी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी दराज, साना प्वालहरू को तत्व मा के जो रातो-तातो नङ, ले, त्यसपछि सेतो कपडा वा प्लास्टर गरेर बन्दूक तिनीहरूलाई समाधान: यो रूपमा निम्नानुसार गरेको छ। छोटो-बस्ने एक विधि तथापि, दयनीय 100-150 rubles खर्च हुनेछ।
तपाईं यो दृष्टिकोण चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले चिकित्सा gauze पट्टी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। को पट्टियाँ चाँडै फिलामेंट्स मा unravel र ड्राइभिङ गर्दा कुनै पनि सतह अपनाउँछन् - यो विधि को एक महत्वपूर्ण drawback छ। यस मामला मा, सहायता पट्टियाँ आउँछन्। अन्तमा, आफ्नो स्वाद छैन छ भने, एक गैर-तुच्छ कार्य कुनै पनि भवन पसलहरूमा बिक्रि छ पूर्ण सेतो माउन्ट टेप सामना गर्न।
यो बन्दूक तत्व बल र गुणस्तर लागि प्रसिद्ध छ विमान ग्रेड एल्यूमीनियम V95, बनेको छ। साथै, सबै भन्दा निर्माताहरु बन्दुक प्रयोग यो सामाग्री, त्यसैले आफ्नो विदेशी सहयोगिहरु पछि कुनै तरिका ढिलाइ कि रूसी उत्पादकहरु।
ट्रंक को वजन कम गर्न मा, ईन्जिनियरहरु arched थियो जो पछिल्लो दृष्टि, परिमार्जन गर्ने निर्णय गरे। अघिल्लो संस्करण मा, तपाईं सम्झना रूपमा, यो बैरल को सम्पूर्ण लम्बाइ साथ brazed थियो। निस्सन्देह, वजन ड्रप, तर यो सबै बन्धन पट्टा नै, soldered हुनुपर्छ जो चाँदी-मिलाप समस्या सिर्जना गरेको छ। अभिनव लामो पुरानो प्रकारका स्पष्ट सामान्य प्रगति hampered किनभने, कार्यान्वयन गर्न नै सुझाव छ। को 153-एम मा 5.9 मिमि तुलनामा 6.8 मिमि बन्दूक सांसद-155 - दृष्टि पात को चौडाई अलिकति उच्च भयो।
बन्धन पट्टियाँ कुरा। पहिलो नजर मा यो कस soldered छ जस्तो देखिन्छ, तर नजिक निरीक्षण मा तपाईं7पिन, यो तत्व र ट्रंक संलग्न छ जो संग नोटिस हुनेछ। 153-एम समान केहि कमसल गुणस्तर guilloche।
बक्से को प्रकार
को कैलिबर आधारमा, भेद हाम्रो नायक लागि बैरल बक्से को2प्रकार बीच बनेको छ। Calibers, सजिलो रूपमा अनुमान गर्न पनि 2: 12h76 र 12h89। एक स्वागत आश्चर्य माथि स्थित collimator स्लट थियो। केही वृद्धि लचीलापन लागि, बक्स को शीर्ष यसरी हात समर्थन को आवश्यक उचाइ कम चपटे मिल्यो छ। अलग स्लट पनि एक टुक्रा मा संघ पर्खिरहेका छन्। एकै समयमा यो guilloche खेलकुद को बिग्रन सजिलो आदेश कि गायब। एमआर विपरीत 153, जहाँ यो पनि छोटो भएको छ बक्स।
बन्दूक मा स्कर्ट
आज सांसद-155 मा राखिएको गर्न सकिन्छ कि धेरै स्कर्ट छन्। राइफल मिलाउने दिन कालो समयमा मदत गर्नेछ वा सुटिङ गुणस्तर सुधार, तपाईं राम्रो लक्ष्य अनुमति दिन्छ। अब हामी स्थापना कुरा हुनेछ collimator दृष्टि, टर्च र एक हात।
पहिलो सन्दर्भमा collimators खुला र बन्द छन्। बारी मा, तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको फाइदा र बेफाइदा छ। निजी, उदाहरणका लागि, यांत्रिक क्षति देखि राम्रो सुरक्षित, जबकि खुला सबै भन्दा राम्रो संकुचित र दिन लायक उपस्थिति, र थप समीक्षा, एक प्रतियोगी भन्दा छ छ। यो सक्छन् रूपमा, मालिक बन्दूक सांसद-155 फैसला हुन। विभिन्न collimators को मूल्य, 4,000 rubles को एक चिन्ह साथ सुरु र पुगन 100 हजार। यस्तो ठूलो विभिन्नता गुणस्तर, ब्रान्ड र विभिन्न सेटिङ गहिराई द्वारा विशेषता छ।
हतियार एउटा महत्त्वपूर्ण शरीर किरा हुन सक्छ र जो अधिकतम बल बन्दूक सांसद-155 सम्म अनुमति दिन्छ एक हात। मूल्य 1300-2000 rubles को लागि लेखा, कम छ। यो रूसी निर्माता बाट उत्पादनहरु लागू हुन्छ। आयात समकक्षों एक बिट अधिक महंगा खर्च हुनेछ। हाम्रो नायक कोष्ठ कुनै पनि शिकारी ठूलो मद्दत हुनेछ कि एक टर्च राख्न अनुमति दिन्छ। साँच्चै उच्च गुणवत्ता राइफल रोशनी 5,000 rubles को एक चिन्ह सुरु हुनेछ। बारेमा भूल छैन, यो चुच्चो एमआर-155 बारेमा कुरा गर्न जारी NVG (रात दृष्टि), जो शिकारी बीच वृद्धि लोकप्रियता प्राप्त छन्। खुशी को पाठ्यक्रम, किरा 75 हजार rubles र थप खर्च गर्न सक्छन् किनभने, सस्तो छैन, छ। यद्यपि, यो रकम लागि मालिकलाई एक निश्चित बाहुल्य, साथै एक पत्थर लिएर कार्यहरु को एक किसिम, ध्यान सहित, र धेरै अन्यसँग उत्कृष्ट ओप्टिक्स प्राप्त गर्दछ। अन्तमा, सबै 100% एमआर-155 मिलाउने लागू निर्णय, तपाईं बट परिवर्तन र रणनीतिक लीवर राख्न सक्नुहुन्छ।
कमी पनि गोलीबारी पिन र बोल्ट, को बोल्ट को रियर छोटा गर्न योगदान जो पासोमा परे। यो कि स्ट्राइकर पूर्ववर्ती देखि काम गर्ने छैनन् एकदम तार्किक निष्कर्षमा आउँछ। यी सबै नवाचारै, को सटर स्ट्रोक लम्बाइ नै स्तरमा रहेका गर्दा 102-105 मिमी equaling। को बोल्ट ह्यान्डल को परस्पर बाँकी। यो अनुदैर्ध्य घाटिहरुमा हो कि, बरु, एक सजावटी समारोह, तर व्यावहारिक छैन ईन्जिनियरहरु, द्वारा कार्यान्वयन थिए उल्लेख गर्नुपर्छ। तिनीहरूले ब्रांडेड र बन्दूक कोठा देख्न सकिन्छ।
को सटर श्री-155-ND पूर्ववर्ती हामीलाई परिचित देखि धेरै फरक छैन को उपस्थिति बारेमा बोल्ने, तर केही तत्व reworked गरिएको छ। सबै को पहिलो, दृश्य कडा एक बन्दूक को दृढता प्रभावित गर्दैन नमूना सुविधा पर्छ। एक्स्ट्रेक्टर पनि एक्सल-मुक्त बन्ने, केही परिवर्तन भइरहेको।
एमआर 153 तुलना गर्दा एक wherein ग्याँस छुट्टी प्रणाली पिस्टन मा बैरल संग सारियो, गहिरो परिमार्जन नोड ध्यान दिनुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हात मा धातु को कुल ठूलो, धेरै राम्रो काम गर्दछ र optimally छ किनभने समाधान, एकदम सही छ। साथै, यो धेरै छरितो विधानसभा सफाई, साथै यसको समायोजन वा प्रतिस्थापन बन्नेछ। केही डर मात्र भागहरु को स्थायित्व मा एक प्रमुख प्रभाव संभावना छ जो एक ग्याँस कोठामा को काण्ड को टांका क्षेत्रको महत्वपूर्ण कमी गर्न सक्छ। सामान्य, धेरै विवादास्पद निर्णय मा।
को दमा ट्यूब र स्टोर पागल लागि जाँदा, तिनीहरूले 153rd संग पाखुरा एक मूल रूपमा 155th मा हुनेछ बनाउने नै रहेको छ। को ट्रिगर संयन्त्र (USM) एक सानो सजिलो भएको छ, र स्थान फारम एकदम markedly परिवर्तन भयो। एकै समयमा, को Kinematic योजना स्पर्श सबै आफ्नो ठाउँमा छोडेर गरेनन्। वंश हथौडा 1.1 मिमि र2किलो छ।
विशेष उल्लेख पनि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेनन् प्रयोग कहिल्यै भएकाहरूलाई लागि, कटर स्टोर, एक उत्कृष्ट सिकारु हुने योग्य हुनुहुन्छ। बट बट प्लेट पनि धेरै अद्यावधिक, मोटा बन्ने र को (प्लास्टिक, रबर) एक परिष्कृत संयोजन flaunting छन्।
उत्सुक शिकारी र आफूलाई शूटिंग को हतियार छाप प्रेमीहरूलाई उज्ज्वल रहनेछ। निस्सन्देह, तथापि, शूटिंग को "स्कूलका साथीहरू" 155 औं बीचमा धेरै फरक छैन यसको पूर्ववर्ती संग तुलना मा, थकान कम महसुस गरिएको छ। यो विशेष लामो जात वा अरू vskidku सांसद-155 लागू हुन्छ। ट्युनिङ, जो तपाईं यस लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो, अलिकति वजन नलिका को माध्यम द्वारा बढ्छ, तर 3.7 किलो (चार्ज विकल्प) माथि, यो हुनेछ। यो ढिलाइ अत्यन्तै दुर्लभ हो, र बारम्बार misfires भेट छैन। नव आगन्तुक बस यो हतियार संग सहज तथापि, अन्य अर्ध-स्वचालित संग रूपमा प्राप्त हुनेछ सानो प्रशिक्षण "स्वचालित" आगो छ। यो सिर्फ यति हुनत लक्ष्य हासिल आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि छ "हरी" शिकारी, 2-3 शट पछि शूटिंग रोक्न भनेर हुन्छ। वास्तवमा, 155th संग प्रशिक्षण धेरै सरल छ: हामी क्षेत्र मा राख्नु केही व्यञ्जन वा बोतल (प्राथमिकताको अंधाधुंध), र त्यसपछि जलिरहेको आगो स्थानान्तरण बारूद भण्डारमा दुवै चल्छ सम्म। मुख्य कुरा - अभ्यास।
बन्दूक सांसद-155 - मालिकको समीक्षा
सामान्य मा, प्रयोगकर्ताहरूले यो बन्दूक को धेरै लाभ रिपोर्ट गरेका छन्। लाभ लागि जाँदा, शिकारी को बहुमत बन्दूक को अपेक्षाकृत सानो वजन, साथै यसको उच्च गुणस्तरीय विधानसभा, पहिलो समायोजन पछि 155-औं तोड्न दिनुहुन्छ जो मन परायो। अन्तमा, धेरै नलिका संग छोटो वजन राइफल दिन सक्ने क्षमता तमाम सकारात्मक छाप पूरा।
निस्सन्देह, यो बन्दूक सांसद-155 मा केही कमीकमजोरी बिना थियो। मालिक को समीक्षा अक्ष क्षेत्रमा tucking धेरै खतरा छ जो कमजोर interceptor, भन्नुहोस्। कहिलेकाहीं ट्रंक मा misfires र बेमेल पङ्क्तिबद्ध छल्ले छन्। अन्तमा, अक्सर हानि कान को बाली को अवस्थामा भेट्नु अक्षों। बाँकी, यो विदेशी उदाहरणहरू संग प्रतिस्पर्धा छ जो ठूलो बन्दूक छ।
अन्त मा हामी यसको मूल्य श्रेणी अनुरूप, एक धेरै राम्रो बन्दूक पायो। घरेलू निर्माता लागि, यो आवश्यक मिलाउने को प्रशंसक गर्न स्वाद हुनेछ जो एक राम्रो उन्नयन, उच्च गुणवत्ता र सहज र उत्तरदायी छ। सुझाव दिन्छौं यो उत्सुक शिकारी र शुरुआती दुवै हुन सक्छ। र जो कन्फिगरेसन आधारमा 25-30 हजार rubles को दायरामा छ, मूल्य कदर हुनेछ।
एक विशेष सेना चक्कु कस्तो हुनुपर्छ
जाडो माछा मार्ने लागि गुन्जन sounders कसरी चयन गर्न
Sailboats: फारम, छनौट सुझावहरूको
Marten लागि जाल। एक Marten जाल लागि शिकार
साइकल "Kama": यसको विशेषताहरु र इतिहास
बन्दूक "बछेडो 1911": फोटो, कैलिबर, सुविधा र मूल्य
फिल्म "Grimsby भाइहरूलाई ': समीक्षा, षड्यन्त्र,, अभिनेता र भूमिकाको
आधुनिक छोटो कथा: वर्षौंदेखि संचित बुद्धि, नयाँ व्याख्या मा
योजना परिवार बजेट
काममा समस्या को प्लट, ईर्ष्या र शत्रुबाट
देखावटी पेट: कारण र निपटान को विधिहरू
घाम Varshava3* (बुल्गारिया / सुनको बालुवा) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
ज्ञान को प्रकार के हुन्?
बाट Vasilisa Volodina कहाँ "का विवाह गरौं" गर्नुभयो? जब उनले स्थानान्तरण गर्न रिटर्न?